Entonox (အန်တိုနော့စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Entonox (အန်တိုနော့စ်)
Entonox (အန်တိုနော့စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Entonox (အန်တိုနော့စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Entonox (အန်တိုနော့စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Entonox ဆိုတာဖိအားမြင့်မြင့် အသုံးပြုပြီးဆလင်ဒါထဲထည့်သွင်းထားတဲ့ ဓါတ်ငွေ့အရောဖြစ်ပါတယ်။ Entonox ကိုအောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတွေမှာ နာကျင်မှုဝေဒနာသက်သာအောင် အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။
အနာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ ဆေးထည့်ခြင်း
အရိုးကျိုးခြင်းကဲ့သို့ ရုတ်တရက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
အခြားရောဂါများ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ
Entonox ရဲ့ အခြားအသုံးဝင်ပုံတွေအကြောင်း သိလိုပါကသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Entonox (အန်တိုနော့စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Entonox ကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြုစတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင်ကိုယ်တိုင် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကသင်အသုံးပြုရမယ့် ကိရိယာကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပေးပြီးသင့်အတွက်လုံလောက်မှုရှိမရှိသေချာစွာစစ်ဆေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Entonox ကိုပထမဦးဆုံးအသုံးပြုချိန်မှာဆလင်ဒါနဲ့ ကိရိယာတွေကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင် အသုံးပြုတတ်အောင် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကသင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆလင်ဒါကိုရေပြင်ညီမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လဲမကျအောင်ထိန်းပြီးမတ်မတ်ထောင်ထားပါ။ ဆလင်ဒါအသေးစားတွေကိုတော့ လှဲထားလို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုဆီ၊ အကျိအချွဲကင်းစင်ခြင်းရှိမရှိသေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။
ဆလင်ဒါ အသုံးမပြုတော့မည့် အချိန်မှသာအဆို့ကိုအားအသင့်အတင့်သုံး၍ လှည့်ပိတ်ပါ။
ဓါတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကြောင့် တရှူးရှူးမြည်သံကြားရလျှင် ဆလင်ဒါအဆို့ကိုပိတ်ပြီးကိရိယာကိုစစ်ဆေးပါ။
Entonox ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူပညာရှင် သင်ပြထားသည့်အတိုင်းတိတိကျကျ လိုက်နာအသုံးပြုပါ။ မသေချာမရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင် ပညာရှင်ကိုချက်ချင်းမေးပါ။
Entonox မှာပါဝင်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေဟာအလွယ်တကူပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့အတွက် ဓါတ်ငွေ့ဆလင်ဒါနားမှာဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ မီးညှိခြင်း လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။
အဆီအခြေခံတဲ့ moisturizing cream လိမ်းပြီးဆလင်ဒါကိုကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုပါနဲ့။ အယ်လ်ကိုဟောဂျယ်လ် အသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်လည်းအယ်လ်ကိုဟောလ်ခြောက်သွေ့သွားအောင် အချိန်အတော်ကြာစောင့်ပြီးမှ ဆလင်ဒါကိုကိုင်တွယ်ပါ။
Entonox (အန်တိုနော့စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Entonox ကိုအသုံးမပြုခင် အနည်းဆုံး ၂၄နာရီကြိုတင်ပြီး ၁၀ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ် အပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Entonox ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Entonox ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Entonox ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Entonox (အန်တိုနော့စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Entonoxသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
မကြာသေးမီကမျက်စိသို့မဟုတ် နားခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူထားပြီးဓါတ်ငွေ့များအသုံးပြုထားရခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Entonox (အန်တိုနော့စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Entonox (အန်တိုနော့စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Entonox ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့
နေ့ရက်၊ အချိန်၊ လူပုဂ္ဂိုလ် စသည်တို့ကိုခွဲခြားမသိနိုင်ခြင်း
Entonox ရဲ့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထနည်းတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့
ဘယ်ဆေးတွေက Entonox (အန်တိုနော့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Entonoxဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Entonoxနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
Methotrexate (အဆစ်ရောင်ရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့်ဆေးဝါး)
Entonox ကို methotrexate နဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သွေးဆဲလ်အရေအတွက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။
Diazepam သို့မဟုတ် Lorazepam (စိုးရိမ်စိတ်များခြင်းနှင့် အိပ်မပျော်ခြင်းကိုကုသရာတွင် အသုံးပြုဥည့်ဆေးဝါး
ဒီဆေးဝါးတွေက Entonox ရဲ့ အာနိသင်ကိုတိုးမြင့်စေပါတယ်။
Bleomycin (ကင်ဆာရောဂါ ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့်ဆေးဝါး)၊ Amiodarone (နှလုံးခုန်စည်းချက်မမှန်ခြင်းကိုကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့်ဆေးဝါး)၊ Nitrofurantoin နှင့် အလားတူပိုးသတ်ဆေးများ (ကူးစက်ရောဂါများကိုကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့်ဆေးဝါးများ)
Entonox ကိုဒီဆေးတွေနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အဆုတ်ထိခိုက်နိုင်ချေကိုပိုမြင့်စေပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Entonox (အန်တိုနော့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Entonoxက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Entonox (အန်တိုနော့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Entonoxဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိရင် Entonox အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်နေရာရာမှာလေခိုအောင်းပြီးပမာဏများလာပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြင်း (ဥပမာသွေးလွှတ်ကြောထဲလေခိုအောင်းခြင်း)
ဖိအားများသည့်နေရာမှ နည်းသည့်နေရာသို့ ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာသည့်အခါ ခန္ဓါကိုယ်တွင်း ပျော်ဝင်နေသည့်ဓါတ်ငွေ့များပူဖောင်းသဏ္ဍာန် ပလုံစီပြီး အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်နေရာများသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်း (ဥပမာအရေးကြီးသည့် သွေးကြောများကိုသွားရောက်ပိတ်ဆို့ခြင်း) သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သည့် ၄၈နာရီအတွင်း ရေငုတ်ထားခြင်း
အဆုတ်ရောဂါ၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း (ဥပမာအဆုတ်တွင်းရှိလေအိတ်ငယ်များပျက်စီးခြင်း)
ဦးနှောက်ပေါ် ဖိအားများနေသည်ဟုသံသယရှိခြင်းသို့မဟုတ် ဤသို့ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုရှိနေခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Entonox (အန်တိုနော့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လူနာကိုယ်တိုင် Entonox ပါဝင်တဲ့ ဆလင်ဒါအဆို့ရှင်ကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ပြီး face mask သို့မဟုတ် mouthpiece ကတဆင့် လိုအပ်သလို ရှူသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ဓါတ်ငွေ့တွေကိုအဆုတ်ကစုပ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် Entonox ကို ကျွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အကူအညီနဲ့ သင့်တော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသုံးပြုတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Entonox (အန်တိုနော့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Entonox (အန်တိုနော့စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Entonox ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံ၊ အချိုးအစားတွေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆလင်ဒါ EA ၃၅၀ လီတာ
ဆလင်ဒါ D* ၅၀၀ လီတာ
ဆလင်ဒါ ED ၇၀၀ လီတာ
ဆလင်ဒါ F* ၂၀၀၀ လီတာ
ဆလင်ဒါ EX ၃၅၀၀ လီတာ
ဆလင်ဒါ G* ၅၀၀၀ လီတာ
ဆလင်ဒါ EW ၁၆၂၇၅ လီတာ
Entonox ကိုအသုံးပြုဖို့ (ဆေးရှူဖို့) လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးရှူပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးရှူမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲရှူလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးရှူတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 22, 2019
Entonox®. http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/hsri/emergencycare/prehospitalcare/jrcalcstakeholderwebsite/guidelines/Entonox-nitronox_nitrous_oxide_50-oxygen_50_noo.pdf. Accessed February 25, 2017.
Entonox®. https://www.drugs.com/uk/Entonox-medicinal-gas-leaflet.html. Accessed February 25, 2017.
မီးဖွားရလွယ်ခြင်းခက်ခြင်း ရဲ့ အရေးအပါဆုံး ကလေးအနေအထားတွေ အကြောင်း ။ ။